Dawladda Empagathi: Dalladda Qabqablayaasha
Bururkii Dawladdii dhexe ee Soomaaliya, rididdii xunkunkii Militariga, ka saariddii Siyaad Barre Dalka kadib, waxaa bilwday sabankii burburka Dalka dowladda iyo xiligii Qaran-jabka,Dalkana hogganka waxaa u qabtay jabhadihii hubaysnaa ee ka soo duulay Arliga Xabashida ee magacoodu ka wada bilowdo xarfka (S), waxaana la galay murug-maarugtii dagaaladii sokeeye, hardankii umulo-dooxa iyo dagaladii saqiiro gowraca, Dalkana waxaa ka hanaqaaday gees-ka-gees Qabqablayaal ku soo caanbaxay si yaabo kala duwan iyo xilliyo kala jaad ah, balse ka midaysan sumadda: Dilka, Dhaca, Kufsiga, Isbaarada, Afduubka iyo waxyeelada ay u gaystaan kuna dhibaan Dalka iyo Dadka, Qabqablayaashan oo horseed ka noqday dagaallo mindhicireedkii dhexmaray beelaha Soomaaliyeed.
Qabqablayaashii waxay Dalka u diideen jiif iyo joog, xasilooni iyo kala dambayn, iyagoo astaan u noqday fowdo iyo jaantaa rogan, Qabqable kastana waxuu tartan iyo isreebreeb ugu jiraa sidii uu ugu guulaysan lahaa kaalinta koowaad iyo horyaalka xigtada Xabashida iyo xigaal sokeeye la wadaaga xagla goynta Soomalida iyo boqno jaridoodaba, si uusan xarig ugu xirmin, Qabqablayaasha waxay si kal iyo laab ah ugu adeegaan xabashida oo u jeedadoodu tahay inay Soomaaliya qaska ku sii jirto.
Waxbo yaysan ararto ila dheeraan iyo ka sheekaynta falalka guraac ee Qabqablayaasha ee aan intaan ku hakiyo una guda galo xudunta qormadeena ah: Dowladda Empagathi oo ah daladda midaysa isuna keenta Qabqablayaasha waxaan wada xasuusanaa markii dagaalada qaraaraa ay ku dhexmareen Magaalada Muqdisho Qabqablayaashii isku bahaystay Ururkii lamagac baxay:Ururka Ladagaalanka Argagaxisada iyo soo Celinta Nabadda (Ashahaado la Dirirka) iyo Wadaadadii ku midoobay:Midowga Maxkamadah( Midowga Mixnadda), dagaaladaa oo looga gacan sarreeyay Qabqablayaasha, qori caardiisna looga saaray Magaalada ayna noqdeen: mid Laash ku tahriiba, mid hal gaari ku baxsada, iyo mid fagaaro ka sheega inuu Toobad keenay!, Waxayse arinu ku dambaysay markii Xabashidu Dalka u qabteen (qabsadeen) Dowladda Eimpagathi waxay Qabqablayaashu raxan raxan u soo galeen iyagoo dib ugu soo labtay Magaalada Muqdisho.
Bal aan ugu horaysiino Qabqablayasha: madaxa Dowladda Empagathi Col.C/llaahi Yuusuf Axmed oo ah Aabaha fidnada, Odaygii qaska iyo Horyaalka burburka, si kala haddaan u dhigno waxuu yahay jabhadkii ugu cimri dheeraa sooyaalka Soomaalida marka laga soo bilaabo xiligii madaxbanaanida waxii ka danbeeyay, qaab kale haddaan u dhigno waa qofkii ugu horeeyay xabbad ku rida Qaran Soomaaliyeed oo dhisan, sidaa oo kale waxaan dhihi karnaa waa Tabcanayaasha Tigreega Tabcanaha ugu dhaga fudud, uguna Ilka jilacsan, uguna xagal dabacsan.
Markaanna aan ku xijinno af-hayeenka barlmaanka ama gudoomiyaha barlmaanka Sheekh Aadan Madoobe oo aan wax tacliin ah iyo waxbarasho toona lahayn oo siduu Dumarka Xersiga ugu goynayay, Fiddowga iyo Iqlaaskana u akhrinayay. meelihiisana u bunaysanayay ayuu ku biiray jabhaddii RRA ee hardanka gacan ku haynta Gobalada Baay iyo Bakool kula jirtay maleeshiyada Qabqable Xuseen Maxamed Caydiid, Sheekh Aadan Madoobe mar qura ayuu isku badalay Qabqablayaasha Koofurta kuwooda ugu caansan, si fiicanna u soo muuqday 96-dii waxii ka dambeeyay, kana mid noqday Xigaalada Xabashida kuwooda ugu firfircoon ee ugu gacan saarka dhow, waxaa is waydiin mudan qofaan tacliin aas-aasi ah lahayn miyuu mudan yahay inuu noqdo af-hayeenka barlamaanka soomaliyeed.
Gudoomiyaha shir waynaha Qaran iyo Dib-u-Heshiisiinta: Cali Mahdi Maxamed oo loo xilsaaray qabanqaabinta Shirwaynaha Nabadaynta Beelaha Saoomaliyeed, waxaana laga wada dharagsan yahay falalka Cali Mahdi si gaar ah waxaa loogu xasuustaa kaalintii uu ku lahaa dagaaladii la magax baxay Afar-Biloodka ee dhexmaray isaga iyo Qabqable Caydiid.
Qabqablayaasha ku jira Dowladda Empagathi waa tiro ciidaan ka badan balse waxaan u kala qaadaynaa illaa dhowr qaybood, ka gadaal markii aan ka soo sheekaynay madaxa Dowladda, af-hayeenka barlamaanka iyo guddoomiyaha shirwaynaha qaran, waxayna kala yihiin Qabqablayaashaas:
- Yuusuf Mire Seeraar oo ahaan jiray guddoomiye ku xigeenka Is-Bahaysiga Dooxadda Jubba (walalaha galguduud).
- Maxamed Siciid Xirsi(Moorgan) oo ah General ka tirsnaan jiray Ciidankii Xoogga Dalka Doomaaliyeed, waxuuna dadaal dheeraad ah ugu juraa sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaalada Kismaayo xoog iyo xeelad.
- Muuse Suudi Yalaxow oo isu magacaabay guddoomiyaha makka al-mukarama (Maddina) soona caanbaxay waxii ka danbeeyay 96kii.
- Maxamed Qanyare Afrax oo ku caanbaxay ku jiro dhex yaalka Dowladdihii Burburka ee soo maray Dalka sida: Dowladii Cali Mahdi, gacan ku rimiskii Caydiid ee salballaar, dowladdii carta ee C/ qasim iyo tan Empagathi.
- Cumar Maxamuud (Cumar Finsh) oo soo caanbaxay markii uu ka falaagoobay Muuse Suudi Yalaxow gacanna ku dhigay qayb ka mid ah xaafadd Maddiina.
- Cusmaan Xasan Cali (Cusmaan Caato) oo si fiican loogu xasuusto kaalintii mugta lahaa ee uu ka qaatay dagaaladda sokeeya iyo sida wayn ee ugu caanbaxay fashilinta, asagoo halhays ka dhigta (looma dhama).
- Xuseen Maxamed Faarax (Xuseen Caydiid) oo si siyaasadda ku soo galay dhaxel uu kala wareegay maamulkii Dowladda Salballaar ee uu ka geeriyooday Abbihii Caydiid dhamaadkii 96kii.
- Col.Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) oo guddoomiye ka ahaan jiray Is-Bahaysigii Dooxadda Jubba(walaalaha galguduud).
- Maxamed Ibrahin Xaabsade oo ka tirsanaa madaxdii Ururka RRA-eeda.
- Maxamed Nuur (Shaati-Guduud) oo isna ka mid ahaa madaxda Ururka RRA-eeda.
- Bootaan Ciise Caalin (Xaaraan-ku-naax) .
Intaas haddaan ku soo gaabino magacyada Qaqablayaasha ku jira Xildhibaanada Golaha Baarlamaanka inagoon si idil usoo bandhigin, balse aan ka soo qadanay kuwooda ugu caansan, waxaanna ku xijinaynaa Qaqablayaasha ku jira Golaha Wasiirada waxayna kala yihiin sidan:
- Cismaan Xasan Cali (Cismaan Caato) oo iska casilay Wasiirka Howlaha Guud & Guriyeynta.
- Muuse Suudi Yalaxow oo laga xayuubiyey Wasiirka Ganadsiga ka gadaal dagaalkii Muqdisha.
- Maxamed Qan-yare Afrax oo isna laga xayuubiyey xilka Wasiirka Amniga Qaranka markii uu ka qayb qaatay dagaaladii Muqdisha.
- Cumar Maxamuud (Cumar Finish) oo isna laga xayuubiyey Wasiirka Owqaafta & Arimaha Diinta ka dib markii uu ku lug yeeshay dagaaladii Muqdisha.
- Bootaan Ciise Caalin (Xaaraan-ku-Naax) oo isna laga xayuubiyey Wasiirka dhaqan-celinta Maleeshiyaadka dagaaladii Muqdisha ka dib.
- Col. Barre Aadan Shire (barre hiiraale) oo isna laga xayuubiyey Wasiirka Gaashaan-Dhigga (Difaaca) ka gadaal markii lagu eedeeyey inuu xilkiisa gudan wayey, arintan oo ku soo beegantay xilli ay shaqaaqooyin ka dheceen Magaalada Kismaayo walina ku sugan xaalad Murugsan.
- Xuseen Caydiid oo isna laga xayuubiyey Wasiirka Howlaha Guud & Guriyeynta ahaanna ku xigeenka Ra'isul wasaaraha ka gadaaal markuu ku biiray kooxda mucaardaka ee xarunta ka dhigatay magaalada Asmara ee Dalka Eratariya (Eritrea) ee la yaqaan (Baarlamanka Xorta ah).
- Maxamed Ibraahim Xaabasade oo ah wasiirka Garsoorka .
- Maxamed Nuur (Shaati-Guduud) oo ah wasiirka ganacsiga.
- Gen. C/risaaq Isaaq Biixi oo kol dhow loo magacaabay Wasiirka gaashaan-dhigga(Difaaca) xil ka qaadista Barre Hiraale ka gadaal.
- Maxamed Dheere oo ah G.G.Banaadir oo la wada ogsoon yahay dhaqankiisa iyo falalkiisa xun xun iyo af-lagaadada joogtada ah.
- Ibraahim Sabriye Shaaweeye oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax lala beegsaday kolonyo baabuur ah uu la socday.
- C/Fataax Ibraahim Sabriye Shaaweeye oo ka dhaxlay Aabihii xilkii uu ka dhintay ahna Caana-nuug aan wax qibrad ah u lahayn maamul xil iyo jago kumana sii jiro xilkan oo kale.
- Xasan Maxamed Nuur (Qalaad) oo dhaawac loo gaystay ka dib markii lala beegsaday gaarigiisa Qarax, kana mid ah Qaqablayaasha gacanta ku haya ama u xilsaaran Ammaanka Gobalka Banaaddir.
- Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ah Taliyaha Booliska lana dalacsiiyey laba kol inta lagu guda jiray fawadada iyo burburka, mar waxaa dalacsiiyey C/qaasim, marka labaadna waxaa dalacsiiyey C/laahi Yuusuf ka dib marka loo magacaabay Taliyaha Booliska, waxaana Qaybdiid si fiican loogu xasuusta madaafiicdii uu ku garaaci jiray xaafadaha Magaalada Muqdisha xilligii uu socday dagaalkii Cakaaro iyo Salballaar, si muuqata waxaa loogu xasuustaa madafiicdii ku soo dhacday Suuqa Dahabka ee Bakaaraha.
- C/Qaadir Cabdi Xasan (Beebbe) oo ah Taliye Xigeenka, oo gacan yare u ahaa Muuse Suudi kuna soo caan baxay dagaal 2003-da dhex maray isaga iyo Muuse Suudi, waxaana loo dallacsiiyey Gaashaanle Dhexe uu ka dhigay C/laahi Yuusuf, waxaana la yaab leh qofaan magaciisa qori aqoon miyuu Gaashaanle Sare miyuu noqon karaa?!, mooryaankii shalay Isbaarada dhiganayey haddii gaashaanle Sare laga dhigo macnaheedu miyeysan ahayn Qofaan Isbaaro dhigan dalacsiin ma mudna Xil iyo darajana iskaba daa warkeed!.
- Maxamed Cismaan (Dhagax-tuur) oo ka tirsan Qaqablayaasha u xilsaaran Ammaanka Gobalka Banaadir.
Intaas haddaan ku soo afmeerno magacyada Qaqablayaasha ku jira Dawladda Empagathi waxaan halkaan ku soo gudbinayaa Heesta ay ku luqeeyaan Fannaaniinta Dhalinta Waayaha Cusub ee hal-ku-dhageedu yahay: Qabqablaha Heestiina oo aan ka soo qaatay dhorkan bayd Heesiina waa tan:
Kollay dhammaan Umaddeena
Kala yaaca ku habsaday
Qabqablahaa ka Masuula!
Kunka Badda lagu tuuray
Kan Rasaasta lagu dilay
Midda Kibir lagu fuulay
Macdanteeda laga kaaray
Karaahsiga Maanta jira
Kala go�a maanta yaalla
Kuwii laayey Shacabkeena
Kista Maato Koloygooda
La dhex dhigay Kiishaddooda
Ka halleeyey Cadowgooda
Uga daran kaalinnimo
Itaaliyaa kalmad tiri
Itoobiyo kuwa keento
Carabtuna sheeko ka leh
Ma doonayaan Koorarkeena
Ku hallaabay sheerer badan
Kulli wada Garasyaani
Kimakada lagu shubay
Korka saarsan Badaheena
Kool koolinta Mujrimkiyo
Maxaa keenay kordhintooda?!
Ninka kacay kacay guri galay
Keega adag isku wada
Kulka iyo gaajadiyo
Kub ka jabka umaddiisa
Kaaga qosla Kulamada
Kuna Gaala Gorgortama
Wuxuu kasi kala garan.
Guntii iyo gaba gabdii waxaa iska cad sida aan soo sheegnay in ay Dawladda Empagathi u tahay Qaqablayaasha Dallad haraysa, maadama ay ka midaysan yihiin adegista Xabashida.